Shiinaha Aspirator Averlast 20 warshad iyo soosaarayaasha | AngelBiss
Mashiinka nuugista la qaadan karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Mashiinka' waxaa loo isticmaali karaa daryeelka guriga. Mashiinka ayaa ah mid yar oo aad u fudud. Waana wax fudud oo fudud in la hawlgaliyo.
Sida la ogsoon yahay in neefsashada habsami leh ay lagama maarmaan u tahay caafimaadka.
Maalmahan, dad badan ayaa la il daran boronkiitada waxayna dareemayaan inay ku adagtahay xaako. Gaar ahaan odayga. Marmarka qaarkood waxay dareemaan xaako inay cunaha ka xirmeen, mana qufaci karaan. Waxay noqon doontaa mid aad u khatar badan.
Mashiinka nuugista ee la qaadan karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Machine' ayaa dalban doona xaaladan deg-degga ah. Mar alla markii aad adigu yeelato, mashiinkan nuugista la qaadan karo ayaa ku siin doona sida ugu dhakhsaha badan uguna nabdoon ee wax looga qabto xaaladda.
Mashiinka nuugista ee la qaadan karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Mashiinka' wuxuu u dhexeeyaa 18L iyo 25L qulqulka hawada.
Marka fadlan samee xulasho habboon codsigaaga gaarka ah sida ku xusan tilmaamaha takhtarka.
1. Nuugid xoog leh ilaa 0.08 Mpa
2. Nidaamka ilaalinta ka hortagga qulqulka oo laba-laaban
3. Nidaamka Dhalada Tooska ah ee Tooska ah, oo kaliya hal riix si aad u soo saarto dhalada
4. 1400 ml dhalo nuugid ah
5. Tikniyoolajiyad casriyeysan oo casri ah oo ka hortageysa gelitaanka noolaha yaryar iyo 6. 6. dheecaanka qalabka
7. Kaliya hal marin oo tubada nuugista ah, iska ilaali marin habaabinta marinka hawada iyo bixitaanka
8. Hawlgallo nadiif ah oo nadiif ah & nadiifin & adeegsi saaxiibtinimo leh
20L & 25L Fursadaha Hawada Hawada
ANGELBISS waxay kaloo bixisaa mashiinka wax lagu nuugo oo 25L ah oo dib loo shubi karo si loo doorto
1. Dib-u-buuxin kara DC12V
2. Si dhakhso leh ugu soo celiso 90 daqiiqo, socod joogto ah 180 daqiiqo (3 saacadood)
3. Batariyada Lithium ka sareeya
Nidaamka Wadista Bamka
Ugu badnaan Socodka hawada
25L / daqiiqo
20L / daqiiqo
Ugu badnaan Cadaadiska Vacuum
Gooni goos goos ah
Si joogto ah Orod
Ugu badnaan Awoodda Jar
Ilaalinta Amniga Labaad
Biyuhu isticmaali karo
Mid keliya, oo aan loo baahnayn meel laga baxo
Vacuum Gauge Range
Range Control Vacuum
Nuugista tubbada Hang Groove
Darbiga Fidinta Talo
Laba, xagga dambe
Qarsoon Rotatable Handle
Haa, xagga sare
3 Nidaamka Badbaadada
Heerka koowaad joojinta qulqulka
Heerka labaad joogsiga qulqulka
AC 220 ~ 240V Galinta, Soosaarka DC 12V
Batariyada Lithium (Hadday cusub tahay)
1 dhigay, DC 12V
Waqtiga lacag bixinta oo buuxda qiyaastii 1.5 saac
Taageero isticmaal waqti 3 saacadood ah
Adapter Gawaarida Ambalaaska
30 daqiiqo kasta
2dii saacba mar
1.0 A -φ5×20mm
5.0 A -φ5×20mm
Soo deji cabirka kartoonka
415x360x300mm oo ah 2 cutub
415x360x300 mm oo ah 2 cutub
Culeyska Saafiga ah Halkii
Soo Dejiso Miisaanka Weyn halkii Kartoon
41 ℉ ilaa 104 ℉ (5 ℃ ilaa 40 ℃)
10% ilaa 90% RH
Cadaadiska Hawada Hawada
-4 ℉ ilaa 131 ℉ (-20 ℃ ilaa 55 ℃)
10 ilaa 95% RH
Mashiinka Mashiinka loo Qaadan Karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Machine', oo leh dabeecad abuur iyo mid la qaadan karo. Fikradda mashiinka ee qaabeynta muuqaalka waxaa laga keenay Jarmalka. Laga soo bilaabo qaabeynta muuqaalka aadanaha, oo leh qaab dhismeedka sheeko cusub, si sahlan u socota, qaabka oo dhan ee mashiinka nuugista la qaadan karo waa mid casri ah oo fudud.
Mashiinka nuugista ee la qaadan karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Machine' waxaa ku shaqeeya tamarta korantada. Faa'iidooyinka aad u fiican: buuqa hoose, saliida oo aan lahayn, cabir aad u fiican, miisaan fudud iyo rakibid fudud. Qalabka mashiinka ayaa dhammaystiran ABC caag ah, dhalaalaya oo siman. Waxay ku dhexjirtay dhalada nuugista 1400ml, awood ballaaran.
Mashiinka Mashiinka loo Qaadan Karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Mashiinka' waxaa loo adeegsadaa hal-abuurnimo Nidaamka Dhalada Tooska ah ee tooska ah iyo nidaamka ilaalinta ka-hortagga qulqulka laba-geesoodka ah
Waxaa aad loogu habeeyay in loo isticmaalo xaalado badan oo xaalad deg-deg ah noocyo badan iyo baahiyaha adeegga ee baxaya.
Mashiinka loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction Mashiinka' waxaa loo isticmaalaa nuugista dareeraha kala duwan, sida malaxda, xaakada iyo dhiigga. Waa qalab caafimaad oo badanaa loo isticmaalo daryeelka guriga, ilkaha iyo xaaladaha degdegga ah ama qolka qalliinka.
Hore: Teknolojiyada Caafimaadka ee AngelBiss
Xiga: Oxygen Generator Adeegsiga Warshadaha
Aspirator-ga La Qaadan Karo
Nuugista Sanka Sanka
Neefsashada Neefsashada Neefsashada Aspirator-ka
Mashiinka Mashiinka La Qaado ee Ilkaha